“Heshiiska DP World Ee Dekeda Berbera Waa Fursadii Iyo Maalgashigii Ugu Weynaa Ee Somaliland Heshay” Rashiid Gaaruf – Qaybtii Koowaad – Wargeyska Saxafi
“Heshiiska DP World Ee Dekeda Berbera Waa Fursadii Iyo Maalgashigii Ugu Weynaa Ee Somaliland Heshay” Rashiid Gaaruf – Qaybtii Koowaad
Washington DC, USA, August 01, 2016 (Saxafi) – Aqoonyahanka reer Somaliland, isla markaana ah Wakiilka Somaliland u fadhiya caasimadda dalka Maraykanka ee Washington DC, Rashiid Gaaruf, ayaa markii ugu horeysay waxa uu si faahfaahsan uga hadlay fursadaha qaaliga ah ee Somaliland ugu jira Maalgashiga ay uga heshay Dekedda Berbera shirkadda laga leeyahay dalka Isu-tagga Imaaraadka Carabta ee DP World, waxaanu heshiiskaas ku tilmaamay Fursadi iyo Maalgashigii ugu weynaa ee ay abid Somaliland ka hesho dunida aan weli aqoonsan dalnimadeeda.
Qoraal dheer oo uu Rashiid Gaaruf nagu soo gaadhsiiyey xidhiidhka Emailka, ayaa waxa uu si qodob qodob ah uga waramay fursadaha maalgashigan ugu jira bulshada iyo dalka guud ahaan Somaliland, isagoo hoos ugu dhaadhacay xataa cadaawadda ayey dalal badani ka qaadeen in fursaddan ay hesho Somaliland.
Qoraalkan Rashiid Gaaruf oo aad u dheeraa waxa ay qaybtiisii hore u dhignayd sidan:
“Waxa aynu markasta nidhaahnaa waddanka waa in loo raadiyo cid maalgashata; si aynu fursad ugu helno in dhaqaalaha la kobciyo, dadkeena shaqo loo abuuro, la dhiso waddanka oo la sameeyo illo dhaqaale oo waawayn oo waddankeena iyo qaranimadeena xoojiya. Ujeedada ugu wayn ee Somaliland leedahay heshiiska DP World, waxa weeye inaynu dekeda Berbera u helo maalgashi lagu dhiso oo lagu qalabeeyo, si Ethiopia u soo mariso alaabta ay la soo degayso Berbera 30%, taasuna u noqoto mid kor u qaadayso dhaqaalaheena, dadkeena shaqo loogu sameeyo, inaynu ku xidhanaano UAE oo u noqono saaxiib wanaagsan suurto galna u noqoto in passportkeena loogu dhoofo UAE, xoolaheena nool si sharci ah loogu dhoofiyo Dubai, inay qaranimadiisu xoogaysato. Taas weeye ujeedada heshiiska DP World.
Intaa waxaa dheer maalgashiga dawlada Dubai ay maalgashanayso dekeda Berbera. Marka hore maalinta la saxeexo heshiiska Dubai waxay Somaliland siinaysaa shan iyo toban milyan oo xaqul qalin ah, waxay keenaysaa qalab cusub dekeda imika jirta lagu qalabeeyo oo heshiiska ku qeexan oo qiimihiisu yahay laba iyo lixdan milyan ($62 million dollars). Waxa intaa dheer oo muhiimada ugu culus Somaliland u leh in sannadka ugu horeeya DP World bilaabayso dhismaha deked cusub oo labaad oo laga soo dejiyo Konteenarka dekedaas oo dhererkeedu yahay 400 meter iyo qalabkeedii oo ay ku baxayso lacag dhan boqol iyo todobaatan $170 million oo dollar. Marka dekeda cusubi shaqayso ee la gaadho in awoodeedii la wada isticmaalay, waxay DP World dhisaysaa deked saddexaad oo dhererkeedu yahay 400 meter oo kale iyo qalabkeedii, dekedaas oo lagu qiyaasay inay ku baxayso ugu yaraan laba boqol iyo toban kun $210 million oo dollar. Heshiiskanu waa heshiis soconaya soddon sanadood. Waa heshiis DP World aanay gaadhi Karin dhamaan go’aanada waawayn oo dhan keligeed iyada oo aan la tashanin Somaliland. Waa heshiis aan ogolayn inay DP World maamulkeedu aanay shir fadhiisan Karin haddii aan qof metelaya Somaliland aanu shirka fadhiyin oo goobjoog ka ahayn.”
La soco qayb kale oo qoraalkan ka mid ah
August 2, 2016 Wargeyska SaxafiDekedda Berbera, Djibouti, DP World, Ethiopia, Gobolka Saaxil, Heshiis, Maalgashi
Previous Previous post: Ethiopia: Catalyst Of The Horn Of Africa
Next Next post: WorldRemit Calls For Urgent Restoration Of Money Transfers To Nigeria